बालबालिका अन्तर्गतका सामाग्रीहरु :-
नगरपालिकाले जग्गा खाली गरायो	शनीबार,4जेठ, 2070
विराटनगर(ब्लाष्ट) व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले विराटगनर उपमहानगरपालिकाले स्थानीय खुद्रा व्यापारीको अवरोधका बीच शुक्रबार हिम्मतका साथ बी प्लट खाली गराएको छ ।	निजी विद्यालयको चौघेराबाट	शनीबार,7बैशाख, 2070
-जे. पी. काफ्ले
निजी विद्यालय निजी लगानीमा सञ्चालन भएका शिक्षालयहरु हुन् । निजी विद्यालयको इतिहास निकै पुरानो भइसक्यो भन्न सकिन्छ । समयको क्रमलाई फर्केर हेर्दा लामो समय पार गरिसकेका यी विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक उन्नयनलाई उल्लेख्य मान्ने कुरामा कुनै द्विविधा लिइरहनु पर्दैन ।	आश्रमका बाबा बिरामी भएपछि	शनीबार,5फागुन, 2069
सुनसरी(ब्लाष्ट) पााच वर्षीया एक बालिकाले चिल्लो तालु सुम्सुम्याउादै सोधिन्, ‘बाबा, तपाई कहिले नीको हुुनुहुन्छ ?’ अर्की १२ वर्षीया बालिका पनि यही प्रश्न गर्दै थिइन्, ३ दशक अघिदेखि नि:सहाय बालबालिका सेवा गर्दै आएका डा. चुन्नी अधिकारीलाई ।
यस्ता प्रश्न डेढ महिनायता उनीमाथि सोधिंदै आएका छन् ।	एउटा डरलाग्दो समस्या	शनीबार,6माघ, 2069
-देबेन्द्र कार्की ४/५ वर्षअघिको कुरा हो, १४ वर्षीय बालकसाग मेरो भेट भयो । उनी मेरै छिमेकी थिए । उनको परिवारबारे पनि मैले राम्रो बुझेको थिएा । उनी मानसिक पीडामा छट्पटिएका थिए ।	लशीतलहर र असहाय बालबालिका	शनीबार, 28 पौष, 2069
-देबेन्द्र कार्की यति बेला तराई/मधेश शीतलहरले आक्रान्त बनेको छ । गाउाघरतिर आम मानिस घुर तापेर चिसो छल्न बाध्य छन् । हुने खानेहरुलाई त शीतलहरले खासै प्रभाव नपार्ला तर हुादा खाने वर्ग शीतलहरबाट बढी प्रभावित छ ।	बालबालिका र युद्धकालले दिएका चोटहरुबालबालिका र युद्धकालले दिएका चोटहरु	शनीबार, 14 पौष, 2069
-सीता सन्ध्या राई शाही
तर कसै गरी बिन्ती !
बालकले नदेखाओस् आफ्नै आाखाको आाशु नदेखाओस् औंलाले टाढाको रित्तो क्षितिज
वा भर्खरै जून अस्ताएको डााडो
बाबुआमाको ठेगाना भनेर ।
इटहरी निवासी दाजु कवि मनु मञ्जिलले लेख्नुभएको यो कविताको अंशले राज्यको कमजोरीले गर्दा उत्पन्न द्वन्द्वबाट बालबालिकाहरु कसरी आफ्ना बालापनहरु गुमाउादैछन् भन्ने बोध गराउाछ ।	निरक्षरता उन्मूलनमा स्थानीय तहको भूमिका	शनीबार, 18 कार्तिक, 2069
-डिल्लीराम कट्टेल	कुनै पनि शासन प्रणालीको केन्द्रभन्दा टाढा रहेका तर केन्द्रको निर्णयलाई प्रत्यक्ष रुपमा कार्यान्वयन गराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने तल्लो स्तरका संघसंस्थाहरु नै सामान्यतया स्थानीय तहको परिभाषाभित्र पर्दछन् ।	शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक तथ्यहरु	शनीबार, 13 आश्वीन, 2069
-प्रा.डा. मीनासिं खड्का
शिक्षामा समान पहँुच नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । सभ्यताको आधार स्तम्भ र विकासलाई मापन गर्ने आधार शिक्षा नै हो । आधुनिक युगमा शिक्षा उत्पादनशील र सहज रुपमा सर्वसुलभ हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ तर आज निरक्षरता गम्भीर समस्याको रुपमा देखा परेको छ किनकि संसारमा एक करोड ७० लाख वयस्कहरु अझै पनि निरक्षर छन् ।	शैक्षिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको खाचो	शनीबार, 16 भाद्र, 2069
सामान्य अर्थमा हामी द्वन्द्व व्यवस्थापन भन्नाले झगडा वा लडाइँ गर्ने दुई समूहबीच समन्वय गर्ने–गराउने कामलाई बुभ्mछौं । अर्थात् द्वन्द्व भन्नेबित्तिकै हाम्रो दिमागमा हतियार भन्ने आउँछ तर शिक्षा क्षेत्रमा भने यसले फरक अर्थ राख्दछ ।	भर्खरै प्रकाशित समाचारहरु